चट्याङको जोखिम | RevoScience Nepali
Home / चट्याङको जोखिम
slide imagesMarch 1, 2017
प्रि–मनसुन अर्थात् बर्खा सुरु हुनुभन्दाअघि पहाडी भेगका घर चट्याङ प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ ।
तस्वीरः श्रीराम शर्मा
काठमाडौं । चैत महिना लागेसँगै चट्याङको जोखिम बढ्दै जानछ । विज्ञहरू भन्छन्–‘असार–साउनसम्म यो जोखिम कायमै रहन्छ ।’ तर, नेपालमा यसबारेमा आममानिस तथा सरकारले चासो लिएको पाइँदैन । यद्यपि, विज्ञहरू भने प्रि–मनसुन अर्थात् बर्खा सुरू हुनुभन्दाअघि पहाडी भेगका घर चट्याङ प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जोखिमबाट बच्ने प्रविधि स्वदेशमा भित्रिए पनि अवलम्बन गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । चट्याङले हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा मानवीय तथा पशुपक्षीको क्षति हुने गरेको तथ्यांक छ ।
चट्याङबाट जोगिन के गर्ने ?
बर्खासम्म चट्याङ पर्ने हुँदा त्यसबाट जोगिन सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । समयमै त्यस्ता सावधानी वा चट्याङ प्रतिरोधी प्रविधिजस्ता अपनाउन नसक्दा यसबाट वर्षेनी जनधनको क्षति भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गत वर्ष मात्रै करिब १ सयजना मानिसको चट्याङका कारण मृत्यु भएको चट्याङविद् डा. श्रीराम शर्माले बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म गाउँका घर कतै पनि सुरक्षित छैनन् । घरलाई सामान्यतः ८–१० हजार रुपैयाँ खर्च गरी प्रविधि जडान गर्न सकेमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ । ‘हामी त्यति पनि गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यति रकम लगानी गर्न कन्जुस्याइ गर्न हुँदैन ।’ सरकारले पुनर्निर्माण गर्न लागेको घरमा ८–१० हजार बढी खर्च गरेर चट्याङप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘चट्याङबाट बच्न जनचेतना जरुरी छ’
डा. श्रीराम शर्मा, चट्याङविद्
चट्याङविद शर्माका अनुसार झापाको दक्षिणपूर्व क्षेत्रदेखि नवलपरासीको चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक चट्याङ पर्छ । तीबाहेक त्रिशुली नदी आसपासका क्षेत्रमा चट्याङले क्षति गर्दै आएको छ । शर्माका अनुसार चट्याङको बेला रूखमुनि बस्नु हुँदैन । पौडी खेलेको बेला तथा जमिनभन्दा अग्लो भएर बस्दा पनि खतरनाक हुन्छ । रूखमुनि बस्दा बढी दुर्घटना भएको पाइएको छ ।
चैत, वैशाख र जेठ महिनामा उठ्दै गरेको बादल सेतोबाट खैरो अनि कालो बनेमा त्यो दिन चट्याङ पर्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । बादल कालो बन्दै गएको छ भने दुई–तीन बजे पछाडिको समयमा भरसक घरबाट बाहिर निस्कन हुँदैन । त्यस्तो बेलामा सुरक्षित स्थानमा बस्दा राम्रो हुन्छ ।
शर्माका अनुसार सामान्यतया चट्याङ भनेको विद्युतीय करेन्टको प्रवाह हो । बादलमा भएको धनात्मक वा ऋणात्मक चार्ज एक आपसमा जुध्दा विद्युत करेन्ट प्रवाह हुन्छ । यसरी करेन्ट प्रवाह हुँदा औसतमा २० किलो एम्पेर विद्युत बहन्छ ।
नेपाली मौसमविद्हरूले भूउपग्रहले खिचेको तस्बिरका आधारमा मौसमसँगै चट्याङको पनि प्रक्षेपण गर्दै आएका छन् । यसबारेमा जल तथा मौसम विभाग, मौसम भिवष्यवाणी महाशाखाका मौसमविद् बरूण पौडेल भन्छन् , ‘प्रि–मनसुनको बेलामा बढी लाइटिङ हुने हुनाले मौसम भविष्यवाणीसँगै दिने गरिएको छ । दिउँसो, बेलुका वा पूर्वी वा पश्चिमी जहाँ–जहाँ चट्याङ पर्ने सम्भावना हुन्छ, मौसम फोरकास्ट गर्दा त्यो ठाउँमा हामी पूर्वसूचना दिन्छौं ।
मौसम पूृृवानुमान विभागले पूर्वसूचना दिए पनि मानिसले चट्याङबाट बच्ने उपाय नजान्दा बढी क्षति हुँदै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले क्षति कम गर्न जनचेतनामूलक काम गर्दै आएको छ । नास्टका उपकुलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेल भन्छन्, ‘स्वदेशमा भित्रिएका चट्याङ प्रविधिमा समस्या देखिएका छन् । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । तिनीहरूलाई कसरी भरपर्दो बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नास्टले भूकम्पछि पुनर्निर्माणका क्रममा बन्ने घरमा चट्याङप्रतिरोधी प्रविधि जडान गर्न पहल भइरहेको जनाएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण धेरै संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउने भनेर अगाडि बढिरहेको छ । चट्याङ अवरोधक संयन्त्रको त्यहाँ अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नका लागि आग्रह गर्दै आएको नास्टको भनाइ छ ।
चट्याङले २०६८ सालयता झन्डै ७ सय मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । यसकारण चट्याङ पर्ने समयमा टेलिफोन, कम्प्युटर, रेडियो, टेलिभिजनजस्ता सामग्री नचलाउँदा राम्रो हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । खुल्ला चौरमा थोरै क्षेत्रफल ओगट्ने गरी घुँडाले भुइँ टेकेर टाउको निहुराएर दुवै हात टाउकोमाथि राखी बस्नुपर्ने हुन्छ । तीबाहेक घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा चट्याङप्रतिरोधी प्रविधि व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता प्रविधिको सहायताले करिब ९० प्रतिशत जनधन सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा बढी चट्याङ पर्ने ठाउँ
सन् २०१४ मा उत्तरी भारतको ब्रह्मपुत्र उपत्यकामा अंग्रेजी महिनाको अप्रिल र मे महिनामा सबैभन्दा बढी चट्याङ परेको अमेरीकी वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रको खोजले देखाएको थियो । तर, पछिल्लो समय भेनेजुयलाको माराकाइबो ताल क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी चट्याङ पर्ने ठाउँ भनिएको छ । त्यहाँ प्रति वर्ग किलोमिटरमा करिब २ सय ५० पटक बिजुली चम्किने गर्छ । अनुसन्धानले के देखाएको छ भने प्रत्येक एक मिनेटमा २८ पटकसम्म बिजुली चम्किने गरेको छ ।
सन् १९६० तिर विज्ञहरूले बहुमूल्य धातु युरेनियमको भण्डारण भएको क्षेत्र आसपासमा बढी चट्याङ पर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, पछिल्ला खोजले यो मान्यता तोडिएको छ । वैज्ञानिकहरूको पछिल्लो खोजमा तलाउको तल्ला भागबाट माथितिर आएको मिथेन ग्यासले माथिल्लो भागको खुला क्षेत्रमा हुने वायुको प्रवाहक तत्व बढाइदिन्छ । यस्तो दाबी वैज्ञानिकले प्रमाणित भने गर्न सकेका छैनन् । वैज्ञानिकले उक्त क्षेत्रको वर्णन र हावाको दिशाको बहावअनुसार हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।
चट्याङ कसरी पर्छ ?
चट्याङ एक प्रकारको विद्युत प्रवाह हो । आकाशमा ‘क्युमिलोनिम्बस’ भन्ने बादलको कारणले जमिनमा विद्युतीय करेन्टको प्रवाहसहित ठूलो आवाज आउँछ । वायुमण्डलमा बादलका पिण्ड एकआपसमा ठक्कर खाँदा बादलमा भएका चार्जका कारण पैदा हुन्छ । यस्तो अवस्था पैदा गर्नुलाई ‘थन्डरस्ट्रम’ भनिन्छ ।
थन्डरस्ट्रमलाई एक विद्युतीय आँधी, चट्याङ अथवा थन्डर साबर पनि भनिन्छ । यो पृथ्वीको वायुमण्डलमा हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जसका कारणले वायुमण्डलमा बिजुली चम्कनुको साथै चट्याङ पर्छ । यस्ता थन्डरस्ट्रम क्युमुलोनिम्बस भन्ने एक प्रकारको काउली आकारको बादलले पैदा गर्दछ । यसकै कारण वायुमण्डलमा आँधी, भीषण वर्षा र कहिलेकाही असिनापानी आउनुको साथै यसले वातावरणलाई चिसो बनाइदिन्छ ।
वायुमण्डलको तल्लो तहमा यसले सुपरसेल पैदा गर्दछ । बादल आकाशतिर २० किलोमिटरभन्दा माथि पुग्दा बादल चिसिए काउलीजस्तो बादल देखापर्दछ । जब बादलको तापक्रम शीतको तापक्रम जति हुन आउँछ, बाफ चिसिएर पानीको थोपा वा हिउँमा परिणत हुनेछ । यतिखेर त्यसको कोषभित्र कम चाप पैदा हुन्छ । यस्ता बादल वायुमण्डलमा लामो दूरी पार गरेमा यसबाट ठूलो मात्रामा थन्डरसेल पैदा गर्ने मान्यता रही आएको छ । यस्ता सेलका कारण हुरीबताससहित वायु तीव्र गतिमा पैदा हुने गर्दछ । यस्ता तीव्र गतिका बादल एकआपसमा ठक्कर खाँदा धनात्मक वा ऋणात्मक चार्ज एकआपसमा जुध्दा गई विजुली पैदा भई चट्याङ पर्ने गर्छ । यस्ता बिजुली लहर बनाइ पैदा भएको देखिन्छ । बादलबाट बादल पृथ्वीतर्फ विद्युतीय लहर उत्सर्जन हुन्छ । यसबाट आएको आवाज २० किलोमिटरसम्म सुन्न सकिन्छ । अपवादको रूपमा ६० किलोमिटरसम्म सुनिएको पाइन्छ । सबै चट्याङले विद्युतको लहर उत्पन्न गराउँछन् ।
चट्याङ विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । जस्तैः बिनाआवाजको चट्याङ । यस्तो चट्याङलाई ‘उष्ण बिजुली’ भन्ने गरिन्छ । अर्को, सुक्खा चट्याङ हुन्छन् । यस्तो चट्याङले जमिनमा कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । कहिलेकाही भकुण्डो आकारको चट्याङ पनि पर्छ । यस्तो आकारको चट्याङ १५ देखि २० सेन्टिमिटरको अर्धव्यास बनाएर देखा पर्दछ ।
फेरि अर्को, तापसहितको चट्याङ आकाशमा देखापर्छ । यसको थन्डरसेलसँग कुनै साइनो हुँदैन । बादलबाट वायुमण्डलमा हुने चट्याङले हावामा चार्ज फैलन्छ । वायुमण्डलको माथिल्लो तहमा बिजुली चम्काइ वा चट्याङ पर्ने गर्छ । यस्तो चट्याङ बादलको माथिल्लो सतहमा हुने गर्छ ।
खुला आकाशमा बिजुली चम्केको देख्नु भएकै होला । बिजुली चम्किँदा आकाशमा कुनै बादल देखिँदैन, किन ? कारणः अन्यत्र सहर वा टाढा बादल भएको आँखाले नदेखिने हुन्छ किनभने १६ किलोमिटरभन्दा माथि रहेको सफा आकाशमा यस्ता दृश्य देख्न सकिने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
बादलभित्रको विभिन्न तहको तापक्रममा फरक परेपछि बादल गतिमान भई हिँड्छ , जसका कारणले बादल र बादलको बीचमा घर्षण पैदा भई धनात्मक तथा ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न गराउँछ । त्यसपछि हुरीबतास चल्ने, आकाशको माथिल्लो भागको बादलभित्रै बिजुली चम्किने गर्दछ । यतिखेरको चट्याङलाई बादलदेखि बादलबीचको चट्याङ भनिन्छ । यस्तो चट्याङले जमिनमा भएको वस्तुमा कुनै असर गर्दैन । तर, निकै समयपछि हावाहुरी पैदा भई जमिनसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि पृथ्वीको सतहमा आँधीबेहरी चल्न थाल्छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो बादलदेखि जमिनसम्मको चट्याङ हो । यसैको कारण मानिसको मृत्यु तथा पशुपक्षी एवं चौपाया हानी–नोक्सानी हुने गरेको छ । बादलबीच घर्षणका कारण धेरै मात्रामा चार्ज बनेपछि बादलमा भएका चार्जको कारणले पृथ्वीमा विपरीत किसिमका चार्ज उत्पन्न हुन्छन् । यसरी आकाशमा भएको बादलका चार्ज र पृथ्वीमा भएको विपरीत चार्जमा विभिन्न प्रतिक्रिया हुने गर्दछन् । आकाशमा बिजुली चम्किएको बेला तापक्रम वृद्धि हुने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । यसले वायुमण्डललाई आकस्मिक रूपमा लगभग ३० हजार डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउने सम्भावना छ । यतिखेर चट्याङको आवाज पनि ठूलो हुन्छ, जसलाई मेघ गर्जन भनिन्छ । पहिले बिजुली चम्कन्छ, पछिमात्र आवाज सतहसम्म आइपुग्छ । भ्याकुममा ध्वनिभन्दा प्रकाशको गति ९० लाख गुणा बढी हुन्छ । प्रकाशको गति करिब ३ अरब मिटर प्रतिसेकेण्ड छ भने ध्वनिको गति करिब ३ सय ४३ मिटर प्रतिसेकेण्ड रहेको छ । यसकारण पृथ्वीमा ध्वनीको तरङ विजुलीको प्रकाशको भन्दा निकै ढिलो आउने गर्दछ । यसैकारण आकाशमा विजुली चम्कने र मेघ गर्जने एकैसाथ भए पनि जमिनमा भने फरक महशुस हुन्छ ।
अधिकांश चट्याङ तलाउ तथा रूख भएको स्थानमा पर्ने हुनाले त्यसबाट बच्ने उपायतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । चट्याङ सुचालक भएको वस्तुमा वहने हुँदा सकेसम्म खेतको कान्लामुनि मुन्टो लुकाएर टुक्रुक्क बस्नुपर्छ । चट्याङ परेको बेलामा रूखमुनि कहिले पनि बस्नु हँुदैन । वरिपरि जमिन र बीचमा एउटा रूख भएको स्थान छ, त्यहाँ चट्याङ पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्था खेतमा काम गरिरहेको अवस्था छ भने उभिएर नबसीकन कान्लामुनि लुकेर बस्न सकिन्छ ।पहिले मानिस वा कुनै वस्तुमा परेपछि चट्याङ रूखमा प्रवाह हुन सक्छ । यो भनेको खुला क्षेत्र चौर वा खेत देखि नजिकै रूख हुँदा सक्छ । यदि जंगलमा भएको बेलमा चट्याङ परेमा तीन वटा रुखको बीचमा कान छोपेर टुक्रुक्क टाउको घोडामुिन लुकाए बस्नुपर्दछ । त्यतिखेर जुत्ताचप्पल लगाएको हुनुपर्दछ । त्यस स्थानमा चट्याङ परिहाले कम क्षति हुनसक्ने विज्ञको भनाइ छ ।